Myanmar TawThaLin Font 1.0 APK Download - Android Tools Apps
APK Downloader Apps Tools Myanmar TawThaLin Font 1.0
"Myanmar TawThaLin Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်MyanmarTawThaLinဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung,Huawei,Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI)တို့လိုဖုန်းတွေမှာRootမလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MB တည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung6.0အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei,Oppo,Xiaomi, Vivo မဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့ Rootလိုအပ်ပါတယ်။Rootနဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လိုBrowserမှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့Commentပေးခဲ့ကြပါ။အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်ကနေဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံးOneClick တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီးInstall လုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarTawThaLin(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Fontကိုနှိပ်ပြီးDefault ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့"ထည့်သွင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)" ကိုနှိပ်ပြီးThemeတွေထဲမှာMyanmar TawThaLin Font ကိုရွေးပေးပြီး Applyလုပ်ပေးရုံပါပဲ:Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Fontတွေထဲမှာ MyanmarTawThaLin Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင်File Managerထဲကိုသွားပြီ Vivo Myanmar Fontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးTawThaLin.itzသို့မဟုတ် TawThaLin.txjကိုဖွင့်ပြီး Applyလုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)"ကိုနှိပ်ပြီး Defaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့"ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပါ။Themeတွေထဲမှာ Myanmar TawThaLin Fontဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီး Applyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefault ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomiဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး "ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ်Theme ထဲက Font ထဲမှာMyanmarTawThaLin Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင်Grantသို့ Allow ပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်"ထည့်သွင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံးOkပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ်:D#MyanmarTawThaLinFontPlay Storeကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ် > DownloadFree at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+TawThaLin+Font"MyanmarTawThaLin"Font is Beautiful Myanmar Zawgyi Font Style!Support AllAndroidDevice.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI VivoandXiaomi(MIUI) without ROOT Access! (Some Samsung OverMarshmallow6.0 Need Root)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supportedMIUI 8++without root!Other phone requires root permission!if youhave anyproblem with this app, please contant me.
App Information Myanmar TawThaLin Font
Myanmar TawThaLin Font
Myanmar Pyatho Font 1.0 APK
"Myanmar pyatho Font" Rootမလိုထည့်သွင်းမြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးအလှသုံးချင်သူများအတွက်Myanmar Pyatho ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။အရမ်းလန်းပါတဲ့စာလုံးပုံစံလေးပါ။Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaom(MIUI) တို့လိုဖုန်းတွေမှာRoot မလိုအပ်ပဲအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်အလုပ်ပြီးပါတယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း2MBတည်းပါပဲ။MIUI 8 အထက်တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူRootမလိုပဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။Huawei Android Version6.0တွေမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Samsung 6.0 အထက်တွေမှာတော့ Root နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivoမဟုတ်တဲ့အခြားဖုန်းတွေမှာတော့Root လိုအပ်ပါတယ်။Root နဲ့သွင်းရင်တော့ Coc,Smuleတို့မှာရောမြန်မာစာလုံးဝမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။Samsung တို့လို Browser မှာစာမမှန်တာတွေကိုရော 100% OKသွားပါလိမ့်မယ်;)အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်တော့ Comment ပေးခဲ့ကြပါ။အသုံးပြုနည်း===========အသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။အကုန်လုံး One Click တွေပါပဲ :)Samsung နဲ့ Oppo ဆို "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးInstallလုပ်ပေးပါ။ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး MyanmarPyatho(myFont)ကိုရွေးပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် Change Font ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Vivo ကတော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်(၁)"ကိုနှိပ်ပြီး Theme တွေထဲမှာMyanmar pyatho Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :Dမရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာMyanmarPyatho Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မရသေးရင် File Manager ထဲကိုသွားပြီ Vivo MyanmarFontဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကိုဝင်ပြီးpyatho.itz သို့မဟုတ် pyatho.txj ကိုဖွင့်ပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၃)" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Huawei ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပါ။Theme တွေထဲမှာ Myanmar Pyatho Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီးApplyပေးလိုက်ပါ။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။Xiaomi ဆိုရင်တော့ "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး"ဖောင့်ပြောင်းမည်"ကိုနှိပ်ပြီး System Font သို့မဟုတ် Theme ထဲက FontထဲမှာMyanmar Pyatho Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီးApplyလုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီးDefaultကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်ဖုန်းကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Rootရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်Other(#Root) ကိုနှိပ်ပြီး Root တောင်းလာရင် Grant သို့Allowပေးပြီးလက်ခံပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် "ထည့်သွင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်နေရင်ဖုန်းကRestartကျသွားပါမယ်။ပြန်တက်လာရင်တော့ ဘယ်နေရာသွားသွားမြန်မာစာအားလုံး Ok ပါပြီ ;')မူလအတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်"မူလအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိမည်"ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထားနိုင်ပါတယ် :D#MyanmarPyathoFontPlay Store ကနေဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူများဒီမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်> Download Free at:http://www.takhon.com/tech/?s=Myanmar+Pyatho+Font"Myanmar Pyatho" Font is Beautiful Myanmar Zawgyi Font Style!Support All Android Device.you can use in Samung, Oppo, Huawei EMUI Vivo andXiaomi(MIUI)without ROOT Access! (Some Samsung Over Marshmallow 6.0NeedRoot)supported HUAWEI 6.0 Marshmallow.supported MIUI 8++ without root!Other phone requires root permission!if you have any problem with this app, please contant me.
com.felixmyanmar.mmyearx 1.3.6 APK
If you are Shwe Myanmar, you will love this Myanmar calendar. It isthe most popular & useful 100 calendar app for Myanmar people.What is inside the app? • Display 100+ years English and Myanmarcalendar (from 1910 to 2020) • Find your birthday in English orMyanmar by Myanmar date or English date • Save your family andfriends' birthday together with calendar • Write down some notesfor your memory • Work without installing Myanmar font nor Internet• Customize app background & adjust font size to suit your eye• Find out the details of Myanmar Calendar: Pyat-tha-dar?Yat-yar-zar? Opote? • View Myanmar Public Holidays & manysocial events about Myanmar • Myanmar Calendar Widget on homescreen ​မင်ျဂ​လာ​ပါ ​ရှေ​မွနျ​မာ။ ​ဒီ​ပွ​က်ခ​ဒိနျ​ကို​ကွိုကျ​မယျ​လို့ ​ယုံ​ကွညျ​ပါ​တယျ။ ​မွနျ​မာ​တို့​အ​တှကျ​အ​ကြျော​ကွား​ဆုံး​နှငျ့ ​အ​သုံး​ဝငျ​ဆုံး ​နှဈ​တဈ​ရာ​ပွ​က်ခ​ဒိနျ​ပါ။ ​ဘာ​တှေ​ပါ​လဲ​ဆို​ရငျ - • ၁၉၁၀-၂၀၂၀ ​ထိ​အင်ျဂ​လိပျ ​မွနျ​မာ​ရကျ​တှေ ​ပါ​တယျ။ • ​မွနျ​မာ​စာ​သှငျး​မ​ထား​သညျ​ဖွဈ​စေ၊ ​အငျ​တာ​နကျ​မ​ရှိ​သညျ​ဖွဈ​စေ​သုံး​လို့​ရ​တယျ။ • ​မွနျ​မာ​ရကျ​နဲ့ ​ရှာ​ရှာ၊ ​အင်ျဂ​လိပျ​ရကျ​နဲ့​ရှာ​ရှာ ​ရှာ​လို့​ရ​တယျ။ • ​နောကျ​ခံ​ပုံ​ကို ​ကိုယျ​ကွိုကျ​တဲ့​ပုံ​ပွောငျး​လို့ ​ရ​သ​လို၊ ​စာ​လုံး​အ​ကွီး ​အ​သေး​လညျး​ကိုယျ​ကွိုကျ​သ​လို ​ထား​လို့ ​ရ​တယျ။ • ​အ​သေး​စိတျ​ကို​လညျး​ကွညျ့​လို့​ရ​တယျ။ ​ဥ​ပ​မာ - ​ပွ​ဿ​ဒါး၊ ​ရကျ​ရာ​ဇာ ​လား။​ဥ​ပုသျ​ရကျ​လား။ • ​မိ​သား​စု ​သူ​ငယျ​ခငျြး ​မှေး​ရကျ​တှေ​မှတျ​ထား​လို့​လညျး ​အ​ဆငျ​ပွေ​တယျ။ • ​ဒိုငျ​ယာ​ရီ​ပဲ ​ဖွဈ​ဖွဈ၊​ကိုယျ​မေ့​မ​သှား​အောငျ ​မှတျ​ထား​ခငျြ​တာ​လေး​တှေ ​ရှိ​လညျး​ရေး​ထား​လိုကျ။ • ​မွနျ​မာ​ပွညျ​က ​ရုံး​ပိတျ​ရကျ​တှေ ​အ​ပါ​အ​ဝငျ၊​မွနျ​မာ ​ပှဲ​လမျး​သ​ဘငျ​ရကျ​တှေ​လညျး ​ကွညျ့​လို့​ရ​တယျ။ • HomeScreen ​ပျေါ​မှာ Widget ​ရှိ​တော့ ​အ​ရမျး ​အ​ဆငျ​ပွေ​တာ​ပေါ့။ Ifyou like it, please pay us. Just kidding. Share in Facebook,Twitter or just tell your friends to use. ​ကွိုကျ​တယျ​ဆို​ရငျ​ကြှနျ​တျော​တို့​ကို ​ပိုကျ​ဆံ​ပေး​ပါ။ ​နောကျ​တာ​ပါ။ Facebook,Twitter ​ထဲ Share ​ပေး​ပါ။ ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတျ​လညျး ​တ​ခွား​သူ​မြား​သုံး​ဖို့ ​ပွော​ပွ​ပေး​ရငျ ​ကြေ​နပျ​ပါ​ပီ။ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို ပိုက်ဆံပေးပါ။ နောက်တာပါ။ Facebook, Twitter ထဲShare ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တခြားသူများ သုံးဖို့ ပြောပြပေးရင်ကျေနပ်ပါပီ။ Myanmar Calendar, Burmese Calendar, is also calledPyatkadain ပြက္ခဒိန်. Pyatkadain ပြက္ခဒိန် plays very important rolein daily life in Myanmar. Myanmar Calendar is based on lunar - fullmoon and new moon. Each Myanmar calendar month represents differentfestivals which are determined by Myanmar calendar date. Asmajority of Myanmar people are buddhist, Myanmar Calendar alsohelps them to indicate the day to take sabbath ဥပုသ်. You will findit very useful if you stay in Myanmar or you are Myanmar.
Samsung ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာဖောင့်ဖုန်းဗားရှင်းအနိမ့်တွေရောအမြင့်တွေမှာပါ သုံးလိုရပါပြီ..Myanmar Samsung Font လေးကို Updateလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖုန်းဗားရှင်း အနိမ့်တွေအတွက် မြန်မာ (iFont) ကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီး ဗားရှင်းအမြင့်ဖုန်းတွေအတွက်တော့ မြန်မာ (Zawgyi)ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။မိမိဖုန်းနှင့်ကိုက်မယ့်ဖောင့်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်က 2MB ထဲပါ အောက်ကLink မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Myanmar Font 1.0 APK
Samsung ဖုန်းဗားရှင်းအမြင့်တွေအတွက် မြန်မာဖောင့် အလှလေးကိုဒီကနေအသုံးလို့ရပါတယ်။မိမိနှစ်သက်ရာ စာလုံးဒီဇိုင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး Install Font လုပ်ပါ။ပြီးလျှင် မိမိဖုန်းကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ..ပြီးရင် Change Font ကို နှိပ်ပြီး ခဏကမိမိသွင်းလိုက်တဲ့ ဖောင့်လေးက နှစ်ခုဖြစ်သွားပါမယ် အဆင်ပြေတဲ့တစ်ခုကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီး Apply လုပ်ပေးလိုက်ရင် မိမိဖုန်းမှာမြန်မာစာလုံးလှလေးနဲ့ ဖုန်းမှာ မြင်တွေ့ ရပါပြီ"
# Typing is Easier Ever - Best Myanmar Keyboard # Bagan Keyboard isa Myanmar Keyboard from emphasizing and hard-working development onMyanmar Language typing system. It also provides the perfectsolution of Android Myanmar Keyboard for those who communicates viainstant messages, with an easier, faster, and smarter. It is alsonominated by Telenor Myanmar asaBest Myanmar Android App for year2014, Digital Winners event.(http://www.telenor.com.mm/pressReleasedetail/Bagan-Keyboard-nominated-for-Best-App-in-Asia-by-Telenor/7)Many Myanmar Keyboard users are now using Bagan Keyboard as theirdefault typing app. It completes you with suggestions. It savesyour time with predefined shortcut phrases. It listens every yourtyping actions and instantly provides you back your preferredphrases. The development team is always taking care of every userfeedback and claim, to provide youabetter experience of typinginstant messages, also to go with flavors at your wish, both Zawgyiand Myanmar Unicode. Bagan Keyboard can be regarded as best MyanmarUnicode Keyboard in the market. We support both Myanmar Unicode andZawgyi Keyboard Layouts. Bagan Keyboard is also known as BurmeseKeyboard, Zawgyi Keyboard, Myanmar Unicode Keyboard. Bagan Keyboardis compatible with Zawgyi Font, Myanmar Unicode Font, Unicode Font,Myanmar Font, Burmese Font. The user can type Myanmar Unicode orZawgyi using Bagan Keyboard and there isasetting in the keyboardto change as user preferred. Bagan Keyboard also supports Shan, Monand Thai keyboard layouts. # အကောင်းဆုံး မြန်မာကီးဘုတ်(ပုဂံကီးဘုတ်) ပုဂံကီးဘုတ်သည် မြန်မာ Developer များ ရေးသားထားသောအကောင်းဆုံး မြန်မာကီးဘုတ် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာ ရိုက်ရာတွင် ဇော်ဂျီ၊ယူနီကုတ် နှစ်မျိုးလုံးကို အဆင်ပြေပြေ ရိုက်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသောမြန်မာကီးဘုတ် ဖြစ်ပါသည်။ ဇော်ဂျီဖောင့် ဖြင့်စာရိုက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ယူနီကုတ်ဖောင့် ဖြင့်စာရိုက်ရာတွင်လည်းကောင်း လွယ်ကူလျှင်မြန် ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် မြန်မာကီးဘုတ်များတွင် ထိပ်တန်းဖြစ်သော၊အသုံးပြုသူများပြားစွာရှိသော မြန်မာ ကီးဘုတ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။မြန်မာစာရိုက်ရာတွင် အမြန်ဆုံး နှင့် အမှန်ကန်ဆုံး ရိုက်နှိပ်နိုင်ရန်ပုဂံကီးဘုတ်ကို အခုပဲ အခမဲ့ Install ပြုလုပ် အသုံးပြုလိုက်ပါ။မြန်မာဇော်ဂျီ၊ မြန်မာယူနီကုတ် ကီးဘုတ် သာမက ရှမ်း၊ မွန် နှင့် ထိုင်းကီးဘုတ်များကိုပါ ပုဂံကီးဘုတ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
If you are Shwe Myanmar, you will love this Myanmar calendar. It isthe most popular & useful 100 calendar app for Myanmar people.What is inside the app?• Display 100+ years English and Myanmarcalendar (from 1910 to 2020)• Find your birthday in English orMyanmar by Myanmar date or English date• Save your family andfriends' birthday together with calendar• Write down some notes foryour memory• Work without installing Myanmar font nor Internet•Customize app background & adjust font size to suit your eye•Find out the details of Myanmar Calendar: Pyat-tha-dar?Yat-yar-zar? Opote? • View Myanmar Public Holidays & manysocial events about Myanmar• Myanmar Calendar Widget on homescreen​မင်ျဂ​လာ​ပါ ​ရှေ​မွနျ​မာ။ ​ဒီ​ပွ​က်ခ​ဒိနျ​ကို​ကွိုကျ​မယျ​လို့ ​ယုံ​ကွညျ​ပါ​တယျ။ ​မွနျ​မာ​တို့​အ​တှကျ​အ​ကြျော​ကွား​ဆုံး​နှငျ့ ​အ​သုံး​ဝငျ​ဆုံး ​နှဈ​တဈ​ရာ​ပွ​က်ခ​ဒိနျ​ပါ။ ​ဘာ​တှေ​ပါ​လဲ​ဆို​ရငျ -• ၁၉၁၀-၂၀၂၀ ​ထိ ​အင်ျဂ​လိပျ​မွနျ​မာ​ရကျ​တှေ ​ပါ​တယျ။• ​မွနျ​မာ​စာ ​သှငျး​မ​ထား​သညျ​ဖွဈ​စေ၊​အငျ​တာ​နကျ​မ​ရှိ​သညျ​ဖွဈ​စေ ​သုံး​လို့​ရ​တယျ။• ​မွနျ​မာ​ရကျ​နဲ့​ရှာ​ရှာ၊ ​အင်ျဂ​လိပျ​ရကျ​နဲ့ ​ရှာ​ရှာ ​ရှာ​လို့​ရ​တယျ။•​နောကျ​ခံ​ပုံ​ကို ​ကိုယျ​ကွိုကျ​တဲ့ ​ပုံ​ပွောငျး​လို့ ​ရ​သ​လို၊​စာ​လုံး​အ​ကွီး ​အ​သေး​လညျး ​ကိုယျ​ကွိုကျ​သ​လို ​ထား​လို့ ​ရ​တယျ။•​အ​သေး​စိတျ​ကို​လညျး ​ကွညျ့​လို့​ရ​တယျ။ ​ဥ​ပ​မာ - ​ပွ​ဿ​ဒါး၊​ရကျ​ရာ​ဇာ ​လား။ ​ဥ​ပုသျ​ရကျ​လား။• ​မိ​သား​စု ​သူ​ငယျ​ခငျြး​မှေး​ရကျ​တှေ ​မှတျ​ထား​လို့​လညျး ​အ​ဆငျ​ပွေ​တယျ။• ​ဒိုငျ​ယာ​ရီ​ပဲ​ဖွဈ​ဖွဈ၊ ​ကိုယျ​မေ့​မ​သှား​အောငျ ​မှတျ​ထား​ခငျြ​တာ​လေး​တှေ​ရှိ​လညျး ​ရေး​ထား​လိုကျ။• ​မွနျ​မာ​ပွညျ​က ​ရုံး​ပိတျ​ရကျ​တှေ​အ​ပါ​အ​ဝငျ၊ ​မွနျ​မာ ​ပှဲ​လမျး​သ​ဘငျ​ရကျ​တှေ​လညျး​ကွညျ့​လို့​ရ​တယျ။• Home Screen ​ပျေါ​မှာ Widget ​ရှိ​တော့ ​အ​ရမျး​အ​ဆငျ​ပွေ​တာ​ပေါ့။If you like it, please pay us. Just kidding.Share in Facebook, Twitter or just tell your friends touse.​ကွိုကျ​တယျ​ဆို​ရငျ ​ကြှနျ​တျော​တို့​ကို ​ပိုကျ​ဆံ​ပေး​ပါ။​နောကျ​တာ​ပါ။ Facebook, Twitter ​ထဲ Share ​ပေး​ပါ။​ဒါ​မှ​မ​ဟုတျ​လညျး ​တ​ခွား​သူ​မြား ​သုံး​ဖို့ ​ပွော​ပွ​ပေး​ရငျ​ကြေ​နပျ​ပါ​ပီ။ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကို ပိုက်ဆံပေးပါ။နောက်တာပါ။ Facebook, Twitter ထဲ Share ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားသူများ သုံးဖို့ ပြောပြပေးရင် ကျေနပ်ပါပီ။Myanmar Calendar,Burmese Calendar, is also called Pyatkadain ပြက္ခဒိန်. Pyatkadainပြက္ခဒိန် plays very important role in daily life in Myanmar.Myanmar Calendar is based on lunar - full moon and new moon. EachMyanmar calendar month represents different festivals which aredetermined by Myanmar calendar date. As majority of Myanmar peopleare buddhist, Myanmar Calendar also helps them to indicate the dayto take sabbath ဥပုသ်. You will find it very useful if you stay inMyanmar or you are Myanmar.